I-Renaissance yayiyinkqubo yenkcubeko kunye neengcali ezigxininisa ukubuyiselwa nokusetyenziswa kweetekisi kunye nokucinga okuvela kwi-classical antiquity, eyenzeka eYurophu c. 1400 - c. I-1600. I-Renaissance ingabhekisela kwixesha lembali yaseYurophu ehamba malunga nemihla efanayo. Kubaluleke kakhulu ukugxininisa ukuba i-Renaissance inexesha elide lophuhliso olubandakanya ukuvuselelwa kwekhulu le-12 nangaphezulu.
Kukho impikiswano malunga nokuba yintoni eyona nto eyenza i-Renaissance. Okubalulekileyo, kwakukho inxaxheba yenkcubeko kunye neyengqondo, inxulumene ngokusondeleyo kuluntu nakwezopolitiko, ekupheleni kwe-14 ukuya kwele-17 kwele minyaka, nangona kunjalo ngokuqhelekileyo iphela kuphela kwii-15 neye-16 leminyaka. Kucatshangelwa ukuba kwavela e-Italy. Ngokwesiko abantu baye bathi ivuselelwe, ngokuyinxalenye, nguPetrarch, owayenomnqweno wokufumanisa kwakhona imibhalo yesandla elahlekileyo kunye nenkolelo enamandla kwimpumelelo yombono wasendulo kunye nxalenye yeemeko zaseFlorence.
Ngomxholo walo, i-Renaissance yayiyintlangano ezinikezelwe ekubuyiselweni nasekusebenziseni ukufunda kwinqanaba, oko kukuthi, ulwazi kunye nesimo sengqondo esivela kwii-Ancient Greek kunye neRoma. Ukubuyiselwa kobuNkokheli ngokusemthethweni kuthetha 'ukuzalwa kwakhona', kunye nabavakalisi be-Renaissance bakholelwa ukuba ixesha eliphakathi kwabo kunye nokuwa kweRoma, abaye babhala ngeMinyaka Ephakathi , babone ukwehla kwempumelelo yenkcubeko ngokuthelekiswa neyure yangaphambili.
Abathathi-nxaxheba bajoliswe, ngokufunda iincwadi zakudala, ukugxekwa kwamagama, kunye nobuchule beklasi, kokubili ukubuyisela kwakhona iindawo eziphakamileyo zale mihla yamandulo nokuphucula imeko yabantu babo. Ezinye zale mibhalo ye-classic zahlala kuphela phakathi kwabaphengululi bamaSulumane kwaye zabuyiselwa eYurophu ngeli xesha.
"Ukuhlaziywa kwe-Renaissance" kunokubhekisela kwithuba, c. 1400 - c. 1600. "Uhlaziyo oluphezulu " lubhekisela ku c. 1480 - c. I-1520. Ixesha lalingenamandla, abaphengululi baseYurophu "bafumana" amazwekazi amashishini, ukuguqulwa kweendlela zorhwebo kunye neepatheni, ukuhla kwe-feudalism (kwixesha elide likhona), uphuhliso lwezenzululwazi ezifana neCopernican system ye-cosmos kunye ukuphakama kwesibhamu. Uninzi lwale tshintsho lwabangelwa, ngokuyinxalenye, yi-Renaissance, njengemathematika yeklasi evuselela iindlela ezintsha zokurhweba kwezemali, okanye iindlela ezintsha ezisuka empumalanga ekukhuliseni ulwandle olwandle. Umshini wokushicilela waphinde waveliswa, uvumele ukuba iifrikanti ze-Renaissance zihanjiswe ngokubanzi (ngokwenene lo mprintsho wawuyinqobo ebonakalayo kunokubangela umphumo).
Kutheni le nto yayibuhluke?
Inkcubeko yamasiko ayengakaze iphela eYurophu, kwaye yafumana ukuzalwa ngokutsha. Kwakukho ukuhlaziywa kweRarolingian kwinkulungwane yesibhozo ukuya kweyesi-9 kwaye inkulu "kwi-Renaissance Century Renaissance", eyabona isayensi yeGrike kunye nefilosofi yabuyela e-European consciousness kunye nokuphuhliswa kwendlela entsha yokucinga eyadibanisa inzululwazi kunye neengcinga ezibizwa ngokuba yiScholasticism.
Kwakuhluke kwii-15 zeeshumi elinesihlanu neshumi elinesibhozo kukuba le nto yokuzalwa ngokutsha yahlanganisana kunye neenkalo zeengcali zeengcali kunye nenkcubeko kunye neenjongo zentlalo kunye nezopolitiko ukudala inxaxheba ebanzi, nangona inomlando omde.
UMbutho kunye nezoPolitiki emva kobuNtshisekelo
Kwixa le-15 leminyaka , kwaye mhlawumbi ngaphambili, iindawo zokuhlala zentlalo kunye nezopolitiko zexesha elidlulileyo, zavumela ukuba iingcamango ezintsha zinyuka. I-elite entsha yavela, ngeendlela ezintsha zokucinga kunye neengcamango zokuzigweba; oko bakufumene kwixesha elidala lalingumsebenzi wokuba basebenzise bobabini njengesiqhelo kunye nesixhobo sokuvuselela kwabo. Ukuphuma kwabahlali bafana nabo ukuba bahambe, njengoko kwenza iSonto lamaKatolika. I-Italy, apho i-Renaissance yavela khona, yayiyinxalenye yeziqendu zedolophu, ngamnye ekhuphisana nabanye ngokuzikhukhumeza, ukurhweba kunye nobutyebi.
Bekuninzi ngokuzimela, kunye nenani elikhulu labathengisi kunye nabakhwebi ngenxa yeendlela zorhwebo zaseMeditera.
Kuloo ndawo yaseNtaliyane, abalawuli beenkundla eziphambili eItali bonke "ngamadoda amatsha", basandula ukuqinisekiswa kwizikhundla zabo zamandla kunye nobutyebi obusanda kuzuza, kwaye babenomdla wokubonakalisa zombini. Kwakukho nobutyebi kunye nomnqweno wokubonisa phantsi kwazo. Ukufa kwabamnyama kwabulala abantu abayizigidi eYurophu waza wabashiya abasindileyo ngobuncwane obuninzi, nokuba ngaba abantu abancinci bazuza ngaphezulu okanye bafumana umvuzo owandayo. Uluntu lwase-Italy kunye neziphumo zoLuntu oluMnyama zivunyelwe ukuhamba ngokubanzi kwezentlalo, ukuqhutyelwa kwabantu rhoqo ukuthanda ukubonisa ubutyebi babo. Ukubonisa ubutyebi nokusebenzisa inkcubeko ukuqinisa intlalo kunye nezopolitiko kwakuyinto ebalulekileyo yobomi ngelo xesha, kwaye xa ubugcisa bezobugcisa bezobuchwephesha babuyela kwihlabathi leklasikhi ekuqaleni kwenkulungwane yeshumi elinesihlanu kwakukho abasebenzisi abaninzi abalungiselele ukubanceda oku kuzama ukwenza amapolitiki.
Ukubaluleka kokuhlonela uThixo, njengoko kuboniswe ngokuthumela imisebenzi yokuhlawula, kwakunamandla, kwaye ubuKristu bubonakalisa impembelelo enkulu kubantu abacinga ukucinga ngengcamango yobuKristu kunye nabalobi be-"pagan".
Ukususela kwimvelaphi yayo e-Italia, ukusasazwa kwe-Renaissance kwiYurophu, iingcamango ezitshintshayo neziguqukayo ukudibanisa iimeko zendawo, ngezinye izihlandlo zidibanisa kwiimbobo zenkcubeko ezikhoyo, nangona zihlala zigcina ingundoqo.
Ukurhweba, umtshato, izazidibanisi, abaphengululi, ukusetyenziswa kwamagcisa ekubambiseni izibambano, kunye nokuhlaselwa kwezempi, zonke zancedisa ukusabalalisa. Ababhali-mlando ngoku bavame ukuphula iReventry ukuya kwiindawo ezincinci, zendawo, njenge-Renaissance Renaissance, i-Renaissance Renaissance, i- Renaissance yaseNtla (inxalenye yamazwe amaninzi) njl. Kukho nemisebenzi ekhuluma ngokuzalwa kweNkcazo njengento yehlabathi ukufikelela, ukuthintela - kunye nokuthonyelwa - empuma, eMerika nase-Afrika.
Abanye ababhali-mbali bathi i-Renaissance iphelile kuma-1520s, amanye ama-1620. I-Renaissance ayizange iphele, kodwa iingcamango zayo zangaphambili zatshintshela ezinye iifom, kwaye iiparadigms ezintsha zavela, ngokukodwa ngexesha lokuguqulwa kwezenzululwazi zekhulu leshumi elinesixhenxe. Kuya kuba nzima ukuphikisa ukuba siseseKlasini (njengokuba unokwenza ngokuKhanya), njengoko inkcubeko nokufunda kuhamba ngendlela eyahlukileyo, kodwa kufuneka udwebe imigca ukusuka apha emva koko (kwaye, ewe, buyele ngaphambili). Unokuphikisa ukuba iintlobo ezintsha kunye neentlobo ezahlukeneyo ze-Renaissance zilandelwe (ukuba ufuna ukubhala isicatshulwa).
Igama elithi 'ukuvuselelwa' ngokuqinisekileyo lihla ukusuka kwikhulu leshumi elinesithoba kwaye luye lwaxubusha kakhulu, ekubeni ezinye iimbali-mlando zibuza ukuba ingaba liyilizwi elisebenzayo. Iimbali-mlando zakuqala zachaza ikhefu lokuqonda ngokucacileyo ngexesha eliphakathi, kodwa kwiminyaka yamashumi eminyaka edlulileyo i-scholarship iphendule ukuqhubeka nokuqhubeka ngokuqhubekayo kwiinkulungwane zingaphambi kwexesha, kubonisa ukuba utshintsho lwe-Yurophu lwalunezinto ezininzi kunezinto zokuziphendukela kwemvelo.
Ixesha lakwade lide lide negolide eliza wonke umntu; ekuqaleni, kwakuninzi kakhulu inququzelelo yabantu, abadlali, kunye nabaculi, nangona besasazeka ngokuprinta. Abasetyhini , ngokukodwa, babone ukuncipha kwamathuba abo emfundo ngexesha loKuvuselela. Akasenakukwazi ukuthetha ngokukhawuleza, zonke iinguqu zegolide (okanye azinakwenzeka kwaye zithathwa njengento echanekileyo), kodwa kunoko isigaba esingazange siphumelele phambili, okanye loo ngxaki yembali yengozi, inkqubela phambili.
Ubugcisa bokubuyisela ubuNtu
Kwakukho ukunyuka kwe-Renaissance ekwakhiweni kwezakhiwo, ezoncwadi, izibongo, umdlalo, umculo, isinyithi, iingubo kunye nefenitshala, kodwa i-Renaissance mhlawumbi iyayaziwa kakhulu ngobugcisa bayo. Umsebenzi wokudala wabonwa njengendlela yolwazi nokuphumelela, kungekhona nje indlela yokuhlobisa. Ubugcisa bekufuneka ngoku kusekelwe ekujongeni ihlabathi lenene, ukusetyenziswa kweemathematika kunye ne-optics ukufezekisa iziphumo eziphambili ezifana nombono. Imizobo, umfanekiso kunye nezinye iifom zezobugcisa zachuma njengoko iitalente ezintsha zathatha ukudala ubugcisa, kwaye ujabule ubugcisa bubonwa njengomqondiso womntu okhuhliweyo.
Mhlawumbi indlela yokuqala yokuhlaziywa kwe-Renaissance yayisisebuntwini, indlela yokuqonda eyenziwa phakathi kwabo bafundiswa uhlobo olutsha lwekharityhulam: i-studia humanitatis, eyayinzima ingcamango ebaluleke kakhulu ngaphambili. I-Humanists yayikhathazekile ngempawu yobuntu kunye nokuzama komntu ukuqonda ubunjani kunokuba kukhule ukuhlonela unqulo.
Iingcamango ze-Humanist ngokucacileyo kwaye zicelomngeni ngokucacileyo umdala wamaKristu, ukuvumela nokuqhubela phambili umzekelo omtsha wezobugcisa emva koKuvuselelwa. Nangona kunjalo, ukuxhatshazwa phakathi kobuntu kunye neCawa yamaKatolika kwaphuhliswa ngaphezu kwexesha, kwaye ukufundiswa kwabantu ngokuyinxalenye kubangele iNguquko . Ubuntu buye bubuhlungu kakhulu, kunika abo babandakanyekayo kwimfundo yokusebenza kwiindawo ezikhuselekileyo zaseYurophu. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba igama elithi 'i-humanist' laliyileyile kamva, njenge "ukuvuselelwa".
Izopolitiko kunye noKhuseleko
I-Renaissance esetyenziselwa ukuba ithathwe njengophonsela phambili umnqweno omtsha wenkululeko kunye ne-republicanism-kwakhona efunyenwe kwimisebenzi malunga neRiphabliki yaseRoma- nangona ezininzi zezixeko zase-Italy zithatyathwe ngabalawuli ngabanye. Le ngcamango iye yahlolwa ngokugqithisileyo ngabalwazi-mbali kwaye inxalenye yatshatyalaliswa, kodwa yenze ukuba abanye abacinga nge-Renaissance baxhamle inkululeko enkulu yonqulo kunye nezopolitiko kwiminyaka kamva. Ukwamkeleka ngakumbi kukubuyisela ukucinga ngombuso njengomzimba onemfuno kunye neemfuno, ukuthatha iipolitiki ngaphandle kokusetyenziswa kobuKristu nokuziphatha okungakumbi, abanye bathi bangakhohlisi, ihlabathi, njengolu hlobo lomsebenzi kaMacavelli. Kwakungabikho ubungqina obumangalisayo kwizombusazwe ze-Renaissance, nje ukuphikisana okufanayo.
Iincwadi kunye nokuFunda
Ingxenye yezitshintsho ezilethwa yiNkwenkwezi, okanye mhlawumbi esinye sezizathu, kwakukutshintsha kwimo sengqondo kwiincwadi zangaphambi kobuKristu. U-Petrarch, owayenomdla "wokukhangela" kwiincwadi zamatye kunye neelayibrari zaseYurophu, waba negalelo kumbono omtsha: omnye (welizwe) onomdla kunye nendlala yolwazi. Esi simo sengqondo sisasazeka, sikwandisa ukukhangela imisebenzi elahlekileyo kunye nokwandisa inani lezinto ezijikelezayo, kwaye kudala kuthonya abantu abaninzi abaneengcamango zangaphambili. Enye enye imbangela enkulu yayiyi-yorhwebo evuselelwe kwimibhalo yesandla kunye nesiseko seelayibrari zoluntu ukuze kube ngcono ukufundiswa okubanzi. Ukuprinta kwangoko kwanika amandla ukuqhuma kokufunda nokusabalala kweetekisi, ngokuzivelisa ngokukhawuleza nangokuchanekileyo, kwaye kwakhokelela kubantu abafundayo abakha isiseko sehlabathi lanamhlanje.
Yintoni ongayenza Ukuba uhlawuliswa nge-College Plagiarism
I-Bay Path College Admissions
I-Longest Home Winning Streaks kwiKholeji yeBhola yaseKholeji
11 AbaPhicothi beNzululwazi abaMnyama abalulekileyo
Bala ngamaphepha ama-Worksheets amabini
Isikhokelo kuLeonardo kunye noBugcisa bakhe kwiCode Da Vinci - Imibuzo neempendulo
Izikolo zoSuku lwaBucala eNew York City
I-Persepolis (iIran) - IXeko-dolophu yolawulo lwasePersi
Iingoma zamaKristu Ngothando LukaThixo